UGurman akanalo ithemba kwinzwa yobushushu yeApple Watch Series 8 | Ndisuka kuMac
Amahemuhemu ayeza kwaye ahambe njengoko umoya uvuthuza kwaye oko kwakunokwenzeka kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngoku akusenakwenzeka. Nantsi into eyenzekayo ngamahemuhemu malunga ne-Apple Watch Series 8 kunye nezinzwa zayo ezahlukeneyo, uMark Gurman, ngoku uthi kwincwadana yakhe "Power On" ukuba isixhobo esitsha I-Apple ayizukongeza le nzwa yobushushu kwisizukulwana esilandelayo.
UGurman ngokwakhe, kunye nabanye abahlalutyi abaziingcali kwiimveliso ze-Apple, walumkisa ukuba kunokwenzeka ukubandakanya le sensor yobushushu kwisizukulwana esilandelayo seewotshi ezikrelekrele. Ngoku ithi lo luvo ayiyi kufika iminyaka embalwa.
I-Apple Watch Series 8 "yeyona iqhelekileyo"
Kwaye kukuba, ukuba sinikela ingqalelo ekuvuzeni kokuqala kunye namahemuhemu alo nyaka mtsha ka-2022 kubonakala ngathi iwotshi ehlakaniphile ye-Apple iya kuba yeyona iqhelekileyo ngokwemigaqo yemisebenzi, utshintsho oluninzi kakhulu ngokwemigaqo yabenzi boluvo alulindelekanga kwaye luninzi. kusenokwenzeka ukuba thina hlala kude nokufika kwamaqondo obushushu, uxinzelelo lwegazi kunye nezinzwa zeswekile yegazi. Le yokugqibela sikholelwa ukuba iya kuba yibhombu xa i-Apple inokuyongeza, kuba ngoku iya kuba lixesha lokuba nomonde.
Ekuqaleni konyaka, I-Apple yatyhilwa njengomnye wabathengi abakhulu benkampani yaseBritane iRockley Photonics, le nkampani iphuhlisa i-non-invasive optical sensors ukuze ibone iimetriki ezininzi zezempilo ezinxulumene negazi, kubandakanywa uxinzelelo lwegazi, i-blood glucose kunye namanqanaba otywala begazi. Ngaba oku kuthetha ukuba siza kuba nazo ezi zinzwa kwizixhobo zesandla ze-Apple kungekudala? Ewe, yonke into ibonisa ukuba akunjalo, kodwa kuyinyaniso ukuba kuyasetyenzwa kwaye ngoko ke kunokwenzeka ukuba amahemuhemu malunga nokufika kwayo ahlala efihliweyo kulo nyaka nalandelayo de abhengezwe ngokusemthethweni.
Siyathemba ukuba oku kufika akuthathi xesha lide kodwa ngokukaGurman, kufuneka sixhobe ngomonde ukuze sibone olu hlobo lwezinzwa ezidityanisiweyo nezisebenza ngokupheleleyo kwi-Apple Watch.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » UGurman akanathemba malunga nenzwa yobushushu yeApple Watch Series 8
iCloud, Iifoto, kunye nezinye iinkonzo zelifu ze-Apple zinokungasebenzi kakuhle